Mid ka mid ah kiishashka korantada ee ugu fiican Amazon ayaa hoos u dhacay $ 20 - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Mid ka mid ah jaakadaha korantada ugu fiican ee Amazon ayaa ka hooseeya 20 $ - BGR
Markaad iibsanayso kiishka korantada, waa inaad si daacadnimo leh adiga kula tahay: macno malahan. Haddii aad dooratid mid ka mid ah astaan ​​wanaagsan, waa isku mid. Raadi moodel leh dib u eegisyo wanaagsan wax walbana way hagaagi doonaan. Dabcan, tani waxay ka dhigeysaa qiimaha xitaa ka sii muhimsan waxaanan leenahay qiime aad u fiican oo ay tahay inaad hubiso. U adeegso koodh kuuban HZ64TQL6 waqtiga jeegga oo hel heshiis weyn Dharka korantada ee Habor kaliya ee ah 20,39 $! Bandhiggaani wuxuu dhici doonaa berrito si kastaba ha ahaatee, sidaa daraadeed sii wad ilaa inta aad karto.
Caafimaad tayo sare leh oo wanaagsan Isku dhafka galaaska galaaska cuntada korantada korantada ah iyo 304 birta aan fiicnayn, galaaska borosilicate oo leh isbarbardhigyo aad u hooseeya ballaarinta kuleylka, taas oo ka dhigaysa inay iska caabbiyaan shoog kuleylka. 100% daboolka hoose ee birta hoose iyo ka hooseysa waxay ka hortageysaa khatarta ah in sunta kiimikada waxyeellada leh ay ka soo gaarto walxaha qashinka ka soo baxa ee loo yaqaan 'BPA' oo ku jira gunta.
Difaac aamin ah oo ku xidhan xiritaanka otomaatiga iyo badbaadada karkarinta badbaadada qumman ee amniga ayaa xakameynaya habka wadista otomaatiga ah, kaas oo ku shaqeynaya ilbiriqsiyada 20 ka dib markii digsiga karkaraya ee Harbor Wireless uu gaaray heerkeeda ugu sarreeya. Waligaa ha ka walwalayn kuleylka kuleylka ah ee kulka shaqada ka timaada ee ka ilaaliya-kariska
bo karkaraya dhaqsi iyo aamusnaan 1 500 W】 iyadoo la adeegsanaayo tikniyoolajiyada kululaynta wareegga biyaha ee ugu dambeysay, waxay qaadataa kaliya daqiiqadaha 7 inay karkariyo koobabka 1,7 L / 8 ee biyaha. Kaamil ah kafee, shaah, oatmeal, baastada iyo in ka badan, ka dhakhso badan microwave. Oo lagu qalabeeyay nalalka LED-ka oo muujinaya in kiishku uu sii kululaanayo.
nashqadeyn Naqshad qurxoon iyo tilmaame buluug ah oo buluug ah】 Lagu dhisay qaab qurux badan, xirmada muraayadda Harbor Glass waa mid qurux badan isla markaana muraayadda indhaha iftiinka leh waxay ka dhigaysaa xitaa mid soo jiidasho leh oo muuqata xilliyada karinta.
afka ballaaran iyo fududahay in la nadiifiyo dhigaalka Keydka Macdanta, gaar ahaan kuwa ay sababaan biyo adag, waxay keenaan kaydiyayaal limescale oo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u leh u nadiifiya. Af ballaaran ayaa loola jeedaa nadiifinta iyo buuxinta labadaba. Si aad uga soo saarto kaydinta macdanta ama wasaqda miridhku ka dhex jirto ee kuleylka dhexdiisa, ku dar laba qaado oo ah soodhada soodhada leh iyo liin biyo ah, isku kari ilaa daqiiqadaha 30 oo si fiican u biyo raaci.
Sannadaha bilaashka ah ee 3 FDA / ETL / cetl waa la oggolaaday, 90 -Day lacag dib, 3 sano, waxaad xor u tahay inaad la xiriirto adeegga macaamiisheena Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid alaabadayada, waan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawino!
Raac @BGRDeals on Twitter in la raaco dalabyada ugu dambeeyay uguna wanaagsan adduunka. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Echo Dot ee gawaarida waa 21 $ maanta - BGR